အစိုးရတပ်များ လိုင်ဇာ တောင်ကုန်းတခုကို ဆက်လက် ထိုးစစ်ဆင် | ဧရာဝတီ
လင်းသန့်| January 7, 2013 | Hits:9,342
15 | | ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) တပ်ဖွဲ့ဝင်များ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
10 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website မြန်မာပြည်သား January 7, 2013 - 5:18 pm	တိုင်းပြည်မှ စစ်ဖြစ်မှ စစ်တပ်က အာဏာရမှာ လို့ ထင်နေသူတွေ တပ်ထဲမှာ ရှိနေသ၍ တိုင်းပြည်က တိုးတက်မှာ မဟုတ်ဘူးကွ။
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 8, 2013 - 3:15 am	အကို မြန်မာပြည်သားရေ၊ နောက်တစု ကျန်သေးတယ်။ တိုင်းပြည်အခြေအနေမကောင်းမှ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ကူဘို့တို့၊ နယ်ပြောင်း အလုပ်သမားကူဘို့တို့၊ ဘာအရေး၊ ညာအရေး အကူငွေတွေ လက်ခံ သုံးပေးနေသူတွေကလဲ တိုင်းပြည် ဒီမိုကရေစီရ၊ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကိုယ့်ခြေပေါ် ရပ်နိုင်မယ့် အခြေအနေ လိုလားကြမယ် မထင်ဘူး။
Reply	swe htwe January 8, 2013 - 12:48 pm	You may be right,taiyintu. Most of the people working in INGOs are self-makers. Corruption in INGOs and the goverment are the same. Onlyafew people are working for the needed.
Reply	AunG January 9, 2013 - 5:03 am	good comment, you are absolutely right . KIO/KIA are only defend their Kachin People and Kachin Land/State from Intruders.
Reply	rain January 9, 2013 - 10:25 pm	အကိုရေ စစ်တပ်က်ုသူရဲကောင်းလိုမကိုးကွယ်သလို ဘယ်ပါတိကမှမဟုတ်ပါဘူး KIAက အပြစ်မဲ့ ကချင်ပြည်သားတွေကိုဆဆက်ကြေးကောက် လူတွေဖမ်းအဖွဲ့ ထဲထည့် နေတဲ့သတင်းတွေအကိုကြားမယ်ထင်ပါတယ် စစ်တပ်ကားတန်းတွေကိုမိုင်းခွဲတာအပြစ်မဟုတ်ပေမယ့် ပြည်သူတွေအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာ တွေကိုမိုင်းခွဲတာ လကိနက်မဲပြည်သူတွေကိုညှင်းပန်းတာက ကာကွယ်တာလားဗျာ ကချင်ပြည်တိုးတက်ဖို့ ကာကွယ်ဖိုလြုပ်တာလို့ ပြော၇င်တော့ ဒိသဘောတရားကိုကျွန်တော်နားလည်လောက်အောင်ဥာဏ်မမိဘူးဆိုပါတော့ဗျာ
Reply	PYONE January 11, 2013 - 11:29 am	rain – I think you are proBURMA ARMY / proBURMANIZATION. i will explain to you. KACHIN are one of Founders of Burma country, others are CHIN and SHAN PEOPLE. They trust in AUNGSAN and they signed together PINGLONG AGREEMENT to gain INDEPENDENCE OF BURMA. Unfortunately, AUNGSAN got muder from some probama extremist people and independence modern burma is born with civil war because of some extremist probama and buddhism. 64 year later civil war are still fighting because All Native Ethnic People want Federal Government. Burma became poorest country in Southeast Asian and the Earth because of Stupid and Mad Burma Army Generals/Bama Leaders. Burma Army’s Reputations are the whole world know for killings own People and school children and theirs worship gods/monks. burma army also have licence to rape , rob , total destroy and kill at Native Ethnic Peoples State/Land.
Reply	pps၁၂၃၄၅ January 7, 2013 - 7:57 pm	မြန့်မာ့လွပ်လပ်ရေး ဗိသုကာ သခင်အောင်ဆန်းက တပ်မတော်ကို ဖက်ဆစ် တပ်မတော် မဖြစ်စေဖို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကို မှာကြားခဲ့တယ်။
ယနေ့ဒီ အချိန်မှာ တော့ တိုင်းရင်းသားလည်း မဟုတ် ပြည်သူလူထု ကရွေးချယ်တာလည်း မဟုတ် ပဲ ရှမ်းပြည်မှာ စစ်ဝတ်ကြီး ဝတ်ပြီး အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့သူကြီးက တပ်မတော်ကို ဦးဆောင်နေပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်မျိုး တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဖက်ဆစ်လို့တင်စားပြောဆို ခဲ့တဲ့ဂျပန် ခေတ်မှာတောင် မရှိခဲ့ဘူး။
မင်းအောင်လှိုင် စစ်ဝတ်ကြီးနဲ့ ရှမ်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ ပင်လုံစာချုပ် ကို ချိုးဖောက်ပါတယ်။
ဒေါ်စု ရေ ဒီလိုသာ ဖက်ဆစ် တွေကို ငဲ့ငှာနေရင်တော့ မကောင်းဘူးထင်တယ်။
ကိုစိုးဝင်းကို ကို မင်းအောင်လှိုင်နေရာ ယူဖို့ ဒေါ်စု ကပြည်သူ့ကိုယ်စား တိုက်တွန်းပေးပါ။
Reply	ရှမ်းဂတူး January 7, 2013 - 9:54 pm	တို့ကနန်း ဆိတ်ကနန်းတော့ မလုပ်နဲ့ လုပ်မှလုပ်အပြီပြင်လုပ်တော့
Reply	Thandar Oo January 7, 2013 - 11:19 pm	KIA မှ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးလနန်က ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲများ အဆုံးသတ်ရေးအတွက် မည်သူမဆို ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ထားသည်။ အင်း…..အခုတော့ဒီစကားမျိုးပြောပြီပေါ့
Reply	Shwe Yoe January 8, 2013 - 6:50 am	Deaf Thein Sein does not hear the voice of the people or pretending being deaf. People no longer want to hear voices from the mourning mothers for their children. The people no longer want to hear the sounds of roaring gun-fires. Children no longer afford watching their parents suffering because of government’s poor management. Therefore, lets live in peace without interfering each other. Lets protect each other’s dignity.